Isitolo esidayisa yonke impahla Isitsha Lift Trailer Umkhiqizi kanye Umhlinzeki | I-CCMIE
Ubukhulu bokuphakamisa umthamo 37t
Uhlobo lokulawula iRadio remote control / control manual
Faka isicelo se-Standard 20ft Container
I-Container Lift Trailer ingabona isivinini sokuphatha esisheshayo ngokuqhathanisa nezindlela zendabuko. Sisebenzisa i-trailer Lift Trailer, singakulawula ngokuphelele konke ukugeleza kokuhamba, asikho isidingo sokudluliselwa komunye umuntu wesithathu, ngakho-ke umsebenzisi wokugcina asikho isidingo sokulinda isikhathi eside, qaphela ezokuthutha ngokushesha. Lapho sisebenzisa i-trailer lift trailer, ayikho enye imishini yokuphakamisa edingekayo, asidingi ukusetshenziswa kwama-port forklifts amakhulu noma amanye ama-cranes angomahamba nendlwana, ikakhulukazi, ukuqasha noma ukuthenga izindleko ze-crane yeselula kuphezulu kakhulu. Ukusebenzisa i-container lift trailer kunganciphisa nengozi nezindleko zokubambezeleka ukuletha izimpahla kumakhasimende. Kungakusiza wakha ubudlelwane obungcono kakhulu namakhasimende.
Ngokuxhumana kwethu nobuchwepheshe nabasebenzisi, siqhubeka nokwenza ngcono imikhiqizo futhi siqinisekisa ukuthi ikhwalithi yesixazululo iyahlangabezana namazinga emakethe nabathengi. Ibhizinisi lethu empeleni lisungule uhlelo lokuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yokuthengiswa kwefektri ye-China CCMIE 2 i-axle 40FT ifreyimu enesinqola se-chassis trailer esine-side lifter crane. Samukela ngobuqotho abathengisi basekhaya nabangaphandle nabasebenzisi bokugcina ukubashayela, noma ngabe bazokwakha uphenyo, noma beze ukuvakashelwa kweFektri nezingxoxo, sizokunikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezixazululo eziphelele, kanye nesiqondiso sethu sokuthengisa esinomdlandla, kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva , silindele ukuvakashelwa kwakho nokubambisana kwakho.
Ukuphakanyiswa kwesiqukathi se-factory side lifter, isitsha sokufinyelela esitsheni singamukela ama-oda abekiselwe amazinga ahlukene wekhwalithi nemiklamo ekhethekile yamakhasimende. Besilokhu sibheke phambili ekwakheni ubudlelwane obuhle futhi obuyimpumelelo besikhathi eside bebhizinisi namakhasimende emhlabeni wonke.
Ngesikhathi sokuphakamisa, qiniseka ukuthi opharetha unombono ocacile wezimpahla, uma kunesidingo, nika umuntu ofanelekayo ukuba amsize emsebenzini wakhe. I-opharetha lima ohlangothini olufanayo nezimpahla eziphakanyisiwe, gcina okungenani u-2m kude ekugcineni kwemoto, uMdwebo 3.6 yindawo enconyelwe ukusebenza ka-opharetha. Lapho ikhonteyina isuswa ku-Container Lift Trailer ukuyoqeqesha, indawo yokusebenza ye-opharetha iqhele ngamamitha amabili ukusuka ekugcineni kwemoto, futhi opharetha
inombono ocacile wemoto nesitimela. Umdwebo 3.6 indawo yokusebenza ye-opharetha
I-opharetha ngeke ishiye isilawuli kude lapho ukuphakamisa umthwalo noma i-crane isebenza.s
Langaphambilini Side Loader
Olandelayo: Side Loader Truck
Isitsha Side ophakamisa